GP's Classic Steel #63: 2005 Suzuki RM250 PulpMX | Motorcycles katalọgụ na nkọwa, foto, ratings, reviews na discusssions
Home → Suzuki → GP si Classic Steel #63: 2005 Suzuki RM250 PulpMX
19 Jun 2015 | Author: dima | Comments Off on GP si Classic Steel #63: 2005 Suzuki RM250 PulpMX
Ọ bụrụ na i lee okwu "abụọ ọrịa strok" na a dictionary, nke a bụ igwe ị ga-ahụ. The 2005 RM250 gbajie na ntị na nwetụrụ aka nke trotul, dọwaa site powerband na ogologo ọsọ. Ọ na-e kpọmkwem antithesis nke ọhụrụ ife nke thumpers ewere n'elu egwuregwu.
The King of zing. Mgbe ọtụtụ iri afọ nke na-akpọ nke abụọ omume ugha na ike keere òkè na lọtrị, Suzuki akpatre see ụtọ ntụpọ na 2005. The 249cc na nkume igwe nri barked si akpa nje ọgụ nke trotul na ọ nọ na-Anam Udeme ruo mgbe ehi bịara n'ụlọ.
Ọ bụ ọsọsọ revving na obere ezigbo karịa electric Yamaha, ma dị nnọọ ka dị irè na track.
ke mbubreyo 2004, Suzuki wetara nke kuu nke narị afọ site snagging Ricky Carmichael n'ebe Honda. N'ụzọ na-eju, mgbe na-anapụta ise utu aha na atọ afọ (naanị otu o merie, a bụ onye ọ wetara nke ruru ka mmerụ), Honda jụrụ re-banye ewu na Suzuki bụ karịa obi ụtọ na-jidere ndị winningest onye na-agba na ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme. na 2005, RC ga-agọzi Suzuki na ya nke mbụ ya Supercross aha ke 24 afọ.
N'oge a-acha anụnụ anụnụ na-achị, Suzuki e atụ ihe si ya akpan akpan niche dị ka Eze nke zing. N'adịghị ka ndị YZ, nke efehe (amaja m na-ekwu ya) fọrọ nke nta ka a anọ na-ọrịa strok, na RM bụ ihe niile banyere ike hit na ngwa ngwa ntụgharị. Ọ bụ snappy, ngwa ngwa na-agbawa agbawa. Nke a ike zuru okè maka Supercross na mgbe ọ bụghị dị ka mfe iji dị ka YZ, ukwuu asọmpi. Ebe RM gharazie klas eduga YZ, bụ na obosara ya ike.
Mgbe ya na-agbawa agbawa ala ka ufọt hit, na RM choro ọzọ mgbanwe, mgbe YZ nwere ike setịrị ọzọ uzo. Ọ bụrụ na Suzuki na-aga mboanuohia pụọ ​​aha klas champ, ha ga-mkpa reinvent ha otu akụkụ ike osisi.
Nke a bụ otu m achọ ịma mma na-achọ ọgba tum tum. N'uche nke m, ọ bụla Factory RM nke ahụ a style bụ a looker. Site Sobe anyịnya igwe na Makita afọ, ọrụ RM si bu na uche ná mmalite 2000 na.
The ujo na '05 RM bụ nnọọ ụtọ dị ka ndụdụ, na n'ubu na n'elu klas. Spring udu nọ ịnọ na maka motocross eji na na ballpark maka onye ọ bụla obere nke ihe ma ọ bụ pro. The Showa unit esoro ogologo na ike ike, ese ezie na whoops na gụwara ya agụụ inweta nnukwu hit.
Ọ dịghị mgbe ụkwụ, hopped were onye na-agba na mberede. Nke a bụ otu nke ọma ota ike.
O kwesịrị ekwesị na ikekwe kasị "abụọ ọrịa strok" 250 ebi mere ga-abụ onye ikpeazụ onye ka mgbe merie a isi US SX / MX aha. The '05 RM gụnyere ihe niile mere abụọ ọrịa strok fun na distilled ya ala ka a zuru okè Nchikota fun na ọnụma. Ọ bụ kacha mfe nke ngwa ngwa na sharpest nke nkọ.
Ọ mere na-agba fun na-emeri mfe; ihe ọzọ nwere ike ị na-ajụ si a motocross igwe?
Suzuki Inazuma 250 India, price, Review, nkọwa, nkọwa
Suzuki GSR 600 – Road Ule – Motoring – The Independent
!!! 2005 Suzuki RM 250 – RM250 2 MKpọnwụ !!!
Journal of Therapeutic Ultrasound Full ederede Ultrasound mmalite…
Honda DN-01 Ducati 60 MV Agusta 1100 Grand Prix Ducati Desmosedici GP11 Suzuki B-King Final prototype Honda DN-01 Automatic Sports ugbo agha Concept Suzuki AN 650 KTM 125 Race Concept Bajaj Discover Honda X4 Low Down Moto Guzzi 1000 Daytona Ọgwụ Bike Kawasaki Ea-6n Honda Goldwing prototype M1 Royal Enfield mgbo 500 classic Suzuki B King Concept Indian Chief Classic smart eScooter Brammo Enertia Ducati Diavel Na a ọgba tum tum Honda ọgba tum tum Honda Dream Kids Dokitto Aprilia Mana 850 Suzuki Colleda CO Harley-Davidson XR 1200 echiche Bike Kawasaki Square Anọ